जिबन सफल बनाउनको लागी यि तीनतरिका अपनाउनुहोस – Khabar PatrikaNp
जिबन सफल बनाउनको लागी यि तीनतरिका अपनाउनुहोस
काठमाडौँ । संसारमा हरेक मान्छेको एउटै चासो हुन्छ, पैसा कसरी कमाउने ? सुख-सयल कसरी प्राप्त गर्ने ? धेरैले वैध तरिकाबाटै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउने सोच राख्छन् । कोही सफल हुन्छन् भने कोही असफल हुन्छन् । केहीले भने अवैध तरिकाले पैसा कमाउन चाहन्छन् । संसारमा अवैध तरिकाले पैसा कमाउने कामले भने सुख होइन, तनाव मात्रै दिने गरेको छ । किनभने उ एकदिन फस्छ, फस्छ ।
नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशका नागरिकको सोचाई हुन्छ,- आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँ, आफ्नो एउटा सानो घर हाओस्, बिरामी पर्दा सामान्य उपचार गर्न पाइयोस्। समाजमा आनो प्रतिष्ठा हाओस् । धेरैको यस्तै चाहना हुन्छ । तर पैसा कमाउने विषय त्यत्ति सहज भने छैन । यसमा केही नयाँ सोच र तरिका जरुरी पर्दछ ।
दुःखबाट सफलता हासिल गरेर व्यक्तिको कथा र जीवन संघर्षले तपाईलाई प्ररित गर्दछ । तपाईको क्षमता बढाउन र मेहनत गर्नका लागि त्यसले तपाईलाई प्रेरित गर्दछ । वारने बफेट हुन वा अमेजनका मालिक वा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका मालिक मुकेश आम्बानीले सपना देखेका कारण नै सफलता हासिल गरेका हुन् ।
कुशलतापूर्वक सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । सफलता हासिल गर्नका लागि तपाई सधै तत्पर समेत हुनुपर्दछ । तपाईको सपना पूरा गर्न कडा मेहनत गरेपछि त्यसले मात्रै स्वर्णिम भविस्यको उज्यालो स्म्भावना तय गर्न सक्छ । यो समचार अनलाइन्स नेपालमा छ ।
Prevहिन्दूहरुको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वतबारे आश्चार्यजनक पाँच रहस्य !
Nextनीजि अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च अब सरकारले व्यहोर्ने
अचम्मले, सस्तियो, काठमाडौंमा जग्गा, सामा,न्य, व्यक्तिले, पनि, किन्न, सकिने,… पुरा पढ्नुहोस
अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्दा पैसा होइन, कार्ड बोक्नुपर्ने..